Omenala China Carton Flow Rack Manufacture and Factory | Huade
A na-etinyekarị Carton Flow Rack maka nchekwa ngwa ọrụ igwe site na nrụpụta na ịtụtụ usoro site na ebe a na-eji arụ ọrụ. O nwere uzo abuo: uzo nkpuchi na uzo eji agba mmiri. A na-edozi okporo ụzọ ndị ahụ na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ. Na-ekwe ka e tinye akpa ahụ na njedebe elu nke ogbe ahụ ma na-agbada na njedebe na-ebudata .Rollers ka akpa ahụ na-agagharị nke ọma site na ike ndọda .once e wepụrụ akpa ahụ na njedebe na-ebudata, ihe na-abịa na-abịa na-ebugharị na-aga n'ihu na-akpaghị aka .Ọ nwere akụkụ ise: RHS Beam na n'akuku (ihu ihu na azụ na akụkụ), RHS Beam (Middle beam na-enweghị akụkụ), Ekewa efere, Akụkụ akụkụ, Roller (galvanized) . The n'ozuzu uche n'akuku bụ 3-4 Celsius ， Dị ka ojiji gburugburu ebe obibi, Ọ nwere ike kere n'ime doo ụdị na etiti ụdị.
A na-ejikọta ihe nkedo na ihu na ihu na azụ na etiti na-akwado ya, a na-etinyekwa ogwe ọkụ na ndị ziri ezi. Uche nwunye nke Flow Rack na-adabere nha, ịdị arọ nke katọn na omimi nke Flow Rack, na-abụkarị 5% - 9%. Amị ikike nke ala bụ 6kg / ibe. Mgbe ngwongwo ahụ dị arọ, enwere ike itinye 3-4 n'otu ụgbọ okporo ígwè. N'ozuzu, otu onye na-akwado nkwado ka arụnyere na 0.6m ọ bụla dị omimi iji mee ka nkwenye nke rollers dịkwuo elu. Mgbe ụgbọ okporo ígwè dị ogologo, a pụrụ ikewapụ ụgbọ okporo ígwè site na ịkekọrịta efere. Ekwesiri itinye breeki na nkwụsịtụ ihe iji belata ngwa ahịa ma belata mmetụta.
A na-ejikarị Carton Flow Rack eme ihe n'ichepụta, azụmahịa, ebe a na-ekesa ya, ụlọ nzukọ mgbakọ na ụlọ nkwakọba ihe na nnyefe dị elu. Ọ na - ejide okporo ụzọ galvanized na aluminom alloy, na - achọpụta FIFO site na iji ibu nke ngwongwo, ma adabara n'akụkụ abụọ nke usoro mgbakọ na ebe nkesa.
Aha Akara Huade
.Dị Akwa Carton Flow Rack
Ihe onwunwe Q235 ígwè
Asambodo OA, ISO9001: 2015
Agba dị ka kwa chọrọ.
Ọgwụgwọ ihu Ntụ ntụ ntụ ma ọ bụ kpaliri
Oghere size nke ziri ezi Oghere diamond
Nkwakọ ngwaahịa A na-ejikọ eriri abụọ na ogwe osisi n'ime ya nke ọma na eriri igwe. na Pee film Kpuchie niile, Akwụkwọ katọn maka ngwa.
Port Nanjing ma ọ bụ Shanghai (Nanjing ka akwadoro maka ihe kpatara akụ na ụba)
Nke gara aga: Kantilever ogbe
Osote: Gbọala Na Akpa